Semalt: Ubuchwepheshe Bamuva Bugcina Izigidi Zokuphila
U-Ross Barber, i-8 (Semalt iMenenja yeNtuthuko yeMakhasimende, uzokwabelana ngezindaba ezimangalisayo ukuthi i-UNICEF isiza kanjani intsha isebenzisa isiteji se-SMS esibizwa nge-U-Report.
Abantu bavame ukubheka i-UNICEF ukuthi ikwazi ukubhekana nezidingo zezingane kusukela le nhlangano isilondoloze intsha engenakubalwa. Ngokucacile, iyaqhubeka ifakazela ekuphenduleni kwayo okusheshayo kuHighricane Irma. Ngokuhambisana no-U-Umbiko, i-SMS yesikhulumi esinekhono lokuthuthukisa isithombe, inikeze ngokugcwele imiyalelo yezokwaziswa kanye nokuphepha ezenzakalweni ezingenzeka. Nakuba kuyindaba nje elula, futhi kuyamangalisa ngempela.
Isicelo sokwenza okusheshayo
Ngomhla ka-2 kuSepthemba, amahhovisi e-UNICEF e-Latin America naseCaribbean ayelokhu exhumana nochwepheshe be-Global Innovation Center ye-UNICEF. Isizathu salokhu kwakuwukuqalisa u-U-Umbiko emaCaribbean futhi ukuyikhuthaza nge-Facebook, njengendlela yokusabela ekubuyekezweni kwe-Trajectory yeziphepho ze-Hurma.
Indlela Elula Yokuxhumana
I-platform entsha yokuxhumana, okuthiwa i-U-Report, isebenzisa i-SMS noma ubuchwepheshe bokuthumela imiyalezo ehambisana nokuhlelwa kwesithombe, ukuqoqwa okulula nokusabalalisa kolwazi olubalulekile, olusindisa ukuphila olusha. Ngaphezu kwalokho, isicelo senza njengento enhle ngabo ukuba bakhulume izinkinga zabo nokucela usizo. Ngakho, u-U-Bika ubala ngempela njengendlela entsha yokuvuselela inhlalakahle yabantu..
Esikhathini esidlule, u-U-Umbiko wasetshenziselwa ukuvimbela ukusabalala kwegciwane elibulalayo e-Liberia emuva ngo-2014. Ngesicelo, i-UNICEF nezikhungo ezihlangene zingathumela izikhalazo ukuze zithole izinkinga abantu abazizwayo futhi bazihlanganyele nazo ulwazi olulondolozayo lokuthola impilo nemilayezo.
Umthombo owodwa Wolwazi
Phakathi kwezingane eziyizigidi ezingu-10,5 ezihlala emazweni aseduze nokubhekana nesiphepho i-Irma, cishe ingxenye yabo bathi u-U-Umbiko wawuwukuphela komthombo wolwazi nolwazi lokuphepha olutholakalayo. Ngenkathi isivunguvungu sidlula, i-UNICEF iyaqhubeka isebenzisa isiteji ukuqoqa ulwazi mayelana nezindawo zobusha abadinga usizo. Ngemuva kwalokho, i-UNICEF ingaqala ukusebenzisa izimpendulo ezihambisana nezidingo zabathintekayo.
Izimpahla ezingenayo ezivela eCopenhagen
Ngokuphendula abampofu, i-UNICEF's Supplies Division eCopenhagen iqala ukusebenza. Ngokugcina indawo enkulu kunazo zonke emhlabeni, bayakwazi ukuhlinzeka ngosizo lwabantu abahlukunyezwayo. Manje, sebeqale izinto zokupakisha nokulayisha ezindizeni.
Ithemba alisoze lafa ngaphandle
Ngesikhulumi sabo se-SMS, u-U-Umbiko, i-UNICEF ikwazi ukuphendula ngokushesha enhlekeleleni ezayo, kuyilapho unikeza intsha ithuba lokuxhumana kanye nomthombo wolwazi. Siyabonga u-U-Umbiko, ngezobuchwepheshe bokuthumela umbhalo nokuthuthukiswa komfanekiso, imiyalo yokuphepha isakazeka masinyane phakathi kwezigidi eziyishumi nengxenye zobusha obeseduze nokubhekana nesiphepho, okusindisa ukuphila okungenakubalwa. Manje, i-UNICEF ithumela ukudla kanye nezinye izinto zokusiza ezihlaselweni. Ngokuvamile, ithemba ngeke life uma nje abantu behlala behlanganyela ekusizeni abanye Source .